Bogga ugu weyn » Wararka Safarka » Toddoba tuhmane ayaa loo qabtay weerar ay ku qaadeen hudheel dalxiis.
Toddoba tuhmane ayaa loo qabtay weerar ay ku qaadeen hudheel dalxiis.
Kolombo, Sri Lanka (eTN) - Booliska ayaa shalay qabtay toddobo qof oo looga shakisan yahay inay weerareen hudheel dalxiis oo ku yaal Maravila, Chillaw Arbacadii la soo dhaafay (Dec 5). Hoteelka dalxiiska, Aquarius Sports Resort waxaa iska leh muwaadin Jarmal ah.
Sida laga soo xigtay milkiilaha hudheelka Dietmar Doering kooxda tuhmanayaasha ayaa waxyeelo culus u gaystay 12 qol oo hudheel ah, oo gaadhaya Rs. 20 milyan. Dalxiisayaal badan oo hoteelka ku sugnaa xilliga weerarka ayaa durba ka baxay Jasiiradda ka dib khibrad cabsi leh.
Kooxda weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inuu hogaaminayo darawal ka tirsan siyaasiyiinta xisbiga talada haya ee deegaanka. Dhacdadu waxay dhalisay cambaareyn ballaaran warbaahinta gaarka loo leeyahay maaddaama booliisku sidoo kale ay jawaab aan fiicnayn ka bixiyeen dhacdada. Dhacdadan waxaa si weyn uga hadlay warbaahinta elektarooniga ah ee maxalliga ah iyadoo hanjabaadan cusub ee ka soo yeereysa siyaasiyiinta siyaasadeed ay sii burburin doonto warshadaha dalxiiska ee dhutinaya Jasiiradda dagaalladu ka socdaan
Booliska Sri Lanka ayaa dhawaan aasaasay qeyb cusub oo loogu talagay in ay sugaan amniga warshadaha dalxiiska iyo ka hortagga howlaha dhaawacaya sumcadda wanaagsan ee dalka.
Booliska ayaa sheegay in eedeysanayaasha berri la horkeeni doono maxkamadda degmada.